အီးယူအဖွဲ့က အမေရိကန် သွင်းကုန်များ အပေါ် လက်တုံ့ပြန် အခွန် ဇွန် ၂၂ ရက်တွင် စတင် တိုးမြှင့် ကေ? - Yangon Media Group
အီးယူအဖွဲ့က အမေရိကန် သွင်းကုန်များ အပေါ် လက်တုံ့ပြန် အခွန် ဇွန် ၂၂ ရက်တွင် စတင် တိုးမြှင့် ကေ?
ဘရပ်ဆဲလ်၊ ဇွန် ၂၁
ဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့ (အီးယူ)က အမေရိကန်ကုန်ပစ္စည်းများအပေါ် သွင်းကုန်ခွန် ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းတိုးမြှင့်ကောက်ခံမှုကို ဇွန် ၂၂ ရက်တွင် စတင်ကောက်ခံသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ အီးယူ၏ စတီးနှင့် အလူမီနီယံအပေါ် အမေရိကန်က ယခုလအစောပိုင်းက သွင်းကုန်ခွန်တိုးမြှင့်မှုကို လက်တုံ့ပြန်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဥရောပကော်မရှင်က ပြောကြား လိုက်သည်ကို ရိုက်တာသတင်းက ဇွန် ၂၁ ရက်တွင် ဖော်ပြခဲ့သည်။
ဤလုပ်ရပ်မှာ ပါးကိုက်၍ နားကိုက်ဆိုသည့်အတိုင်း လုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ကုန်သွယ်ရေးစစ်ပွဲ လျင်မြန်စွာဖြစ်လာနိုင်သည်။ အကယ်၍ အမေရိကန်သမ္မတက ဥရောပထုတ်ကားများ အပေါ် ပြစ်ဒဏ်ပေးရန်ခြိမ်းခြောက်မှုကို လုပ် ဆောင်လာပါက ကုန်သွယ်ရေးစစ်ပွဲ အမြန်ဖြစ်ပွားမည်မှာ သေချာနေသည်။ ဥရောပကော်မရှင်က အမေရိကန်ကုန် ပစ္စည်းယူရို ၂ ဒသမ ၈ ဘီလီယံ (ဒေါ်လာ ၃ ဒသမ ၂ ဘီလီယံ)ဖိုးကို အခွန်စည်းကြပ်ရန် ဥပဒေကို တရားဝင်ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သည်။ ထိုပစ္စည်းများတွင် စတီးနှင့် အလူမီနီယံပစ္စည်းများ၊ လယ်ယာထွက်ကုန်၊ သကြားပြောင်း၊ မြေပဲ၊ ဝီစကီ၊ ဂျင်၊ အထည်နှင့် မော်တော်ဆိုင် ကယ်များ ပါဝင်သည်။
အီးယူကုန်သွယ်ရေးကော်မရှင်မင်းကြီး စေစီလီယာမယ်လ်စထရောင်းက ”ကျွန်မတို့ ဒီလိုမဖြစ်ချင်ပါဘူး” ဟု ၎င်း၏ကြေညာချက်တွင် ဖော်ပြခဲ့သည်။ အမေရိကန်၏ တစ်ဖက်သတ်မလျော်ကန်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့် အီးယူအနေ ဖြင့် ရွေးချယ်စရာမရှိ၍ လုပ်ရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားလိုက်သည်။ သူမက ဆက်လက်၍ အီးယူအဖွဲ့က ညီမျှသည့်တုံ့ပြန်မှုကို လုပ် ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေးဥပဒေနှင့်အညီ လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အမေရိကန်က သတ္တုအခွန်များ ဖယ်ရှားခဲ့ပါက မိမိတို့ကလည်း ပြန်လည်ဖယ်ရှားသွားမည်ဖြစ် ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ အီးယူ၏ စတီးနှင့် အလူမီနီယံအပေါ် အမေရိကန်က အခွန်တိုးမြှင့်ခဲ့၍ ထိုလုပ်ငန်းများ အခက်ကြုံနေရသည်။ အခွန်မှာ ယူရို ၆ ဒသမ ၄ ဘီလီယံဖိုးရှိသည်။
ထရန့်၏ အီးယူ၊ ကနေဒါနှင့် မက္ကဆီကိုတို့၏ စတီးကို ၂၅ ရာ ခိုင်နှုန်း၊ အလူမီနီယံကို ၁ဝ ရာခိုင်နှုန်းအခွန်မြှင့်ခြင်းကို ဇွန်လဆန်းတွင်စတင်ခဲ့သည်။ မတ်လက စတင်ခဲ့သော ခြွင်းချက်ကို အမေရိကန်က ပယ်ဖျက်ခဲ့သည်။ ကနေဒါက ဇူလိုင် ၁ ရက်မှစ၍ အမေရိကန်ပို့ကုန်များအပေါ် ကနေဒါဒေါ်လာ ၁၆ ဒသမ ၆ ဘီလီယံ (ဒေါ်လာ ၁၂ ဒသမ ၅) ဘီလီယံကို စတင်စည်းကြပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာခဲ့သည်။ မက္ကဆီကိုကလည်း အမေရိကန်ပို့ကုန်များအား အခွန်တိုးမြှင့်ကောက်ခံလျက်ရှိနေပြီဟု သိရသည်။